Miyuu Marmaray Dhulgariirku Ma Xasiloon yahay? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMiyuu Marmaray Dhulgariirku Ma Xasiloon yahay?
Miyuu Marmaray Dhulgariirku Ma Xasiloon yahay?
25 / 09 / 2019 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY
waa dhulgariirkii marmaray u adkaysta
Mashruuca Marmaray, oo lagu qeexay inuu yahay mashruuc boqol sano ah, ayaa loo dhisay inuu u adkeysto dhulgariir weyn oo ah 9. Magaalada Istanbul waxay qiyaastii u jirta 20 kiiloomitir masaafo u jirta Waqooyiga Anatolian Fault Line oo ka bilaabmaysa dhanka bari ilaa koonfur-galbeed ee jasiiradaha badda Marmara. Sidaa darteed, aagga mashruucu wuxuu ku yaal aag u baahan tixgelin weyn oo halista dhulgariir.
Waxaa la ogyahay in noocyo badan oo lamid ah tunelo ay ku dhacaan dhulgariir la mid ah baaxadda laga filayo gobolkaan oo ay ku badbaadeen iyadoon waxyeello weyn la geysan. Kobe Tunnel ee Jabaan iyo Bartada Bartamaha San Francisco, USA waa tusaalooyin sida ugu xoogan ee loo dhisi karo tuneladaan.
Marka lagu daro xogta jirta, macluumaad dheeri ah iyo xog ayaa laga soo uruuriyay cilmiga cilmiga dhulka, cilmiga dhulka, juqraafi ahaan iyo biyo-saare meteorolojiga iyo sahaminta mashruuca Marmaray, kaasoo aasaas u ahaa naqshadeynta iyo dhismeyaasha tunelada la dhisay iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyadda injineeriyadda casriga ee ugu casrisan.
Marka loo eego, tuneesooyinka ku dhex jira baaxadda mashruucan waxaa loo qaabeeyey inay hor istaagaan dhulgariirkii ugu sareeyay ee laga filayo gobolka.
Khibradihi ugu dambeeyay ee dhacdadii dhul gariirkii ee 1999 ee ka dhacay Izmit - Bolu waa la falanqeeyey khibradani waxay qayb ka yihiin aasaaska naqshadeynta Mashruuca Isgoysyada Wadada Wadnaha ee Isgoysyada Istanbul (Marmaray).
Qaar ka mid ah khubarada ugu wanaagsan ee heer qaran iyo heer caalami ayaa kaqaybgalay daraasadaha iyo qiimeynta. dhulgariirkii ka dhacay Japan iyo Degmada Mareykanka waxaa la dhisay hore ee tunnel badan oo la mid ah iyo khubaro sidaas daraaddeed gaar Japan iyo Maraykanka, caddaymaha waa in la kulmay design ee tunnel ah ee horumarka ah ee taxanaha ah, saynisyahano ka shaqeeyay in iskaashi dhow la leh oo ku takhasusay Turkey.
Saynisyahanada Turkiga iyo khubarada ayaa si balaaran uga shaqeynayay ogaanshaha astaamaha dhacdooyinka suuxdin kara; iyo ilaa hadda, oo ku salaysan dhamaan macluumaadka la ururiyey iyo faahfaahinta taariikhiga ah Izmit ee Turkey - Bolu ka dhacdooyinka 1999 ee gobolka, oo ay ku jiraan xogta ugu dambeeyay helay ayaa lagu falanqeeyay iyo sida loo isticmaalo.
Khabiirada Japanese iyo American waxay gacan ka geysteen falanqaynta xogtan waxayna taageereen hawlaha la xiriira; Waxay sidoo kale ku jiraan dhammaan aqoontooda iyo waayo-aragnimadooda ballaaran ee naqshadeynta iyo dhismaha dhulalka seismic iyo jilicsanaanta jilicsan ee dhismayaasha iyo dhismooyinka kale iyo saldhigyada, si ay u daboolaan qeexida ay tahay in ay soo buuxiyaan Qandaraaslayaasha.
Dhulgariirrada waaweyni waxay u geysan karaan dhaawac culus mashruucyada kaabayaasha waaweyn haddii saameynta dhulgariirrada noocaas ah aan si habboon looga fiirsanaynin baaxadda qaabeynta. Sidaa darteed Marmaray Project loo isticmaalo ee lagu daydo computer-ku-saleysan ugu horumarsan iyo America, khubarada ugu fiican ka Japan iyo Turkey, katılmışd habka design ka.
Markaa, kooxda khubarada ah, oo qayb ka ah ururka Avrasyaconsult, ayaa ka caawin doona naqshadeeyayaasha qandaraaslayda iyo khubaro si ay u hubiyaan in haddii ay dhacdo xaalad-xumo (sida, dhulgariir aad u weyn oo ka jira gobolka Marmaray) dhacdadani uma noqon karto musiibo dadka maraya ama ka shaqeeya tunelada. wuxuuna talo ka bixiyay arintan.
Qaybta buluugga ah ee khariidadani waa Badda Madowga iyo qaybta dhexe waa Badda Marmara ee ku xiran Bosphorus. Khadka Aagga Waqooyiga Anatolian wuxuu noqon doonaa bartamaha dhulgale kale ee gobolka; khadkan khaladka ah wuxuu ku fidsan yahay jihada bari iyo galbeed wuxuuna ka gudbaa qiyaastii 20 kilomitir koonfurta magaalada Istanbul.
Sida laga arki karo ka map this, qaybaha koonfureed ee badda xumeeyayna iyo Istanbul (koonaha bidix ee sare), waxa uu ku yaalaa mid ka mid ah goobaha ugu firfircoon Turkey ee dhulgariir. Sidaa daraadeed, tuneellada, dhismayaasha iyo dhismayaasha waxaa loo dhisay qaab aan wax khasaare ama burburin ahi ka dhicin haddii ay dhacdo dhulgariir.
Umut Oran, iskudhuf gariirka dhismayaasha miiska saaran miiska
YHT Viaducts 10 Resistant XNUMX
3. Mashuur dhulgariim ah oo kunka sano ah
Safarka Safarka Dhulgariirka Derince
Professor Dr. Wuxuu qiimeeyaa duruufaha mashaariicda ka soo horjeeda dhulgariir, dhexdhexaad ah
Marmaray iyo Buundooyinka, Waa kuwa u adkaysanaya Dhulgariirka Badda ee Marmara
Geedka duufanta leh ee ka yimaada isgoyska İzmir
Kobcinta tareenka baaskiillada u adkeysta (Video)
Alaabooyinka u adkeysanaya olol-celinta iyo qalalaasaha qaybta jidka tareenka
Mashaariicda Mega waxay u adkeysan karaan xitaa dhulgariirka ugu daran
Isku xirka Asphalt oo ka shaqeeya Isparta
Erciyes Ski Center ayaa riixaya
Tiklim Tıklım Xarunta Dhexe ee Ski ee Erciyes
Sandıklı - Denizli Railway Line Wadada Dayactirka Mashruuca Sandıklı - Dazları -…
Isgoysyada Wadada Tareenka ee Magaalada Istanbul
Xuduudda Waqooyiga Anatolian
Ma Marmaray Dhulgariirka Dhulgariirka
Marmaray waxay ku saleysan tahay baaxadda dhulgariir
Tunnel ee Marmaray
Dhulgariirkii Marmaray ma yahay mid u adkaysta
Dhulgariirkii ka dhacay Marmaray
22 Kun Oo Kaararka Magaalada Ah Oo Loo Soo Bandhigay Ardayda Kocaeli
Xilliga Mushaharka Mushaharku wuxuu ka bilaabmayaa Nidaamka Baarista Wajiga ee Waddada Shiinaha Subway